Yintoni eyahlukana noLuntu noLuntu?
I-Subjective vs. Injongo yokuBhala
Nanini na xa ndichazela umahluko phakathi kweendaba kunye nolwalamano loluntu kubafundi bam, ndinika le meko ilandelayo:
Khawucinge ukuba ikholeji yakho ibhengeze ukuba iphakamisa izifundo (ininzi iikholeji zenza ngenxa yamaconsi kwiinkxaso karhulumente). I-ofisi yobudlelwane boluntu inika umxholo wokupapashwa ngokunyuka. Ucinga ukuba ukukhululwa kuya kuthetha ntoni?
Ewe, ukuba ikholeji yakho yinto enjengeyami, mhlawumbi iya kugxininisa indlela ukunyuka kwenyameko ngayo, nokuba isikolo sisaphila kakhulu.
Kuyakuthi mhlawumbi uthethe ngendlela ukunyuka kwafuneka ngayo ngokubhekiselele ekubhekeni kwezimali, njalo njalo.
Ukukhululwa kunokuba ne-quote okanye amabini avela kumongameli wekholejini ekuthethwa ukuba uyazisola ukuba kufuneka adlulise iindleko eziqhubekayo zokuqhuba indawo kubafundi kunye nendlela ukuphakanyiswa kwayo kugcinwa ngayo ngokuthobekileyo kunokwenzeka.
Konke oku kunokuba yinyani. Kodwa ngubani ocinga ukuba akayi kucatshululwa kwikholeji yekholejini? Abafundi, kunjalo. Abantu abaya kuphazamiseka kakhulu ngokunyuka kwabo yiyo kanye abangayi kuba nako. Ngoba kutheni? Ngenxa yabafundi banokuthi ukwanda kwimiba embi kwaye kuya kwenza kube nzima ukuba bathathe iikhosi apho. Lo mbono awuyi kuyenza le nkonzo nayiphi na inzuzo.
Indlela abaNdaba beNdaba bafikelela ngayo kwiNdaba
Ngoko ukuba ungumlobi wephephandaba lomfundi obelwe ukubhala inqaku malunga nokunyuka kweekhondom, ngubani onokuthi udliwano-ndlebe naye?
Kucacile, kufuneka uxoxe nomongameli wekholeji kunye nawaphi na amanye amagosa athatha inxaxheba.
Kufuneka uxoxe nabafundi kuba ibali aligqibekanga ngaphandle kokuxoxisana nabantu abachaphazelekayo kuthathwa inyathelo. Oku kuqhubela ukuqhubela izifundo, okanye ukutshabalaliswa kwefektri, okanye nabani na owake waphathwa kakubi ngezenzo zeziko elikhulu.
Oku kubizwa ukuba kufumaneka emacaleni amabini ebali .
Kwaye kukho ukumahluko phakathi kobudlelwano boluntu kunye neendaba. Ulwalamano loluntwini lusetyenziswe ukubeka i-positive spin kuyo nayiphi na eyenziweyo yesikhungo esifana nekholejini, inkampani okanye i-arhente karhulumente. Yenzelwe ukwenza ukuba iqumrhu libukeke lihle kangangoko kunokwenzeka, nangona isenzo sithathwa - ukwanda kwezaziso - akukho nto.
Kutheni iindwendwe zibalulekile
Ubume bemihla ngemihla alukho malunga nokwenza amaziko okanye abantu babonakale behle okanye babi. Ngokuphathelele ukubonisa ngokubonakalayo, okulungileyo, okubi okanye okunye. Ngoko ukuba iikholeji yenza into enhle-ngokomzekelo, ukufundisa isikolo samahhala kubantu basekhaya abaye baqeshiswa-ke ukufihla kwakho kufuneka kubonakalise oko.
Yonke i-semester kufuneka ndichazele kubafundi bam ukuba kutheni kubalulekile ukubuza amaziko anamandla kunye nabantu ngabanye, nangona, ubuncinane, loo mibutho ibonakala ihamba kakuhle.
Kubalulekile ukuba intatheli zibuze abantu abasemagunyeni ngenxa yokuba ziyinxalenye yemisebenzi yethu ephambili: ukukhonza njengoluhlobo lwe-watchdog elikhuselekileyo eligcina isohlo kwimisebenzi yamandla, ukuzama nokuqinisekisa ukuba ayisebenzisi kakubi loo mandla.
Ngelishwa, kwiminyaka yamuva ulwalamano loluntu luye lwaba namandla ngakumbi kwaye luyafana nanjengoko iindaba zeendaba ezizweni lonke ziye zalahla izinkulungwane zabanyathelisi.
Ngoko nangona kukho i-PR amanxusa amaninzi (abadumili beendaba bawabiza ngokuthi badibanisa) batshabalalisa kakuhle, kukho iincwadana zentatheli ezincinci kwaye zincinci ukuba zijongane nazo.
Kodwa ke kutheni kubaluleke kakhulu kunanini ngaphambili ukuba benze imisebenzi yabo, kwaye bayenze kakuhle. Kulula: Silapha, ukuthetha inyaniso.
Ukuziphatha Okungekho Thixo: Ukuba Ulungile Ngaphandle KoThixo okanye Inkolo Kunokwenzeka
Iimpahla Zokomoya NezoPhilisa ze-Tourmaline
Ukuwa kweDynasty yaseChina ye-Qing ngo-1911-1912
Ifoto yoTyelelo lweeGrips ezimbini eziphathekayo
IiNkqubo zeMali zentengiso yeNcinci esuka kwi-SBA
I-Biography yeSenator yase-US Rand Paul
Amatye aPhezulu okuPhezulu kunye neempawu zabo
Imizila yeebhasi kunye neeShedyuli ziya kwenziwa njani?